Ugari neInvestment ªº Citizenship neReal Estate ªº
Hurumende Hofisi yeChipiri Ugari neInvestment
Ugari uye pasipoti yeSaint Kitts neNevis + kodzero yekushanyira vhiza-yemahara kunyika zana nemakumi mashanu neshanu
Ugari uye pasipoti yeAntigua neBarbuda + kufamba-kwemahara kuenda kunyika zana nemakumi mashanu
Ugari uye pasipoti yeSanta Lucia + kodzero yekushanyira vhiza-yemahara kune nyika zana nemakumi matanhatu nenomwe
Ugari uye pasipoti yeGrenada + kodzero yekushanyira vhiza-yemahara kunyika zana nemakumi mana
Ugari hweDominica uye pasipoti + kodzero yekufamba-isina mahara kuenda kunyika zana nemakumi matanhatu
Zvakanakisa zvigadzirwa uye hunhu hwakanakisa. Yakanakisa imwe nhandare yendege.
Chirongwa chekare uye chakatsiga, Yakanyanya nhamba yenyika dzisina-vhiza,
Iyo purogiramu inobatsira kwazvo muCaribbean. Paradhiso yeYachtsmen.
Dominica Citizenship neSecret Bay Kugovana
Yako Dominica Ugari kubva kuSecret Bay
Mutengesi: AAAA MUNYAYA
Inoshamisa inochengeterwa padenga-pamusoro pekutenderera uko sango remvura rinosangana negungwa muDominica, yeCaribbean "Island of Nature", Chakavanzika Bay ndeimwe yenzvimbo dzepamberi dzekutandarira uye hotera yakasimbiswa. Iyo yakavharirwa nhanhatu-nyeredzi imba yekutandarira ine dzimba dzakashongedzerwa dzimba dzekugara, imwe neimwe iine padziva rekuzvinyudza uye muridzi wega wevagari, pa-call concierge, vabiki uye vatungamiriri, yakavanzika kumahombekombe kuwana uye kushandurwa kwakagadzirwa. kune muenzi wese.
Yakagadzirwa nemugadziri ane mukurumbira Fruto Vivas, mubairo-unohwina Chakavanzika Bay Villas vanozivikanwa pasirese nekuda kwehunyanzvi hwavo musanganiswa wepamusoro dhizaini nehunyanzvi hwenzvimbo. Ivo vanogadzira yakasarudzika yekuvhurika yekunze-mukati pekugara pakati penzvimbo yakasvibirira nharaunda. Green Globe inosimbiswa uye inogadzirwa chose kubva kuzvinhu zvinogadzirika, Chakavanzika Bay Resort inorova chiyero chakakwana chezvemamiriro ekunze uye nyaradzo yevaenzi
Izvo zvigadzirwa zvepamusoro paSecret Bay Resort zvinopa zororo risingaenzanisike pachitsuwa ichi. Tanga zuva rako neyakagadzirisazve iyo yoga parwizi Bwa Mang Wellness Pavilion, tsvaga rugare kuTreetop Gommier Spa, ita chikafu chemanheru chakashama paZing Zing Restaurant pasina menyu, uye pedzisa manheru ako nemabiko kumahombekombe. Vetiver Sunset Deck inotarisa Chakavanzika Gungwa. Ichokwadi kuti paradhiso yakawanikwa.
Zvese mukati nekunze kwenzvimbo yekutandarira, akasiyana maonero uye akachinja hupenyu zviitiko zvakakumirira. Kunyangwe iwe ukasarudza kufamba "mukati" pamwe needu nyanzvi varapi, kutsvaga kurarama, kufema masango emvura kana kuburukira munzvimbo dzakadzika dzechitsuwa pane iyo mapopoma canyoning adventure, vashanyi vanovimbiswa kusiya Dominica zvachose zvachinja.
Imwe-ye-ye-mhando yeCaribbean real estate inopa, muunganidzwa wakaganhurirwa wemapurani emiti-dhizaini dzimba dzakavakirwa padenga rinotyisa kumusoro kwakatarisana neGungwa reCaribbean.
IYO YAKAKOSHA HOTEL IN DOMINIKA + YAKO DOMINIKA PASSPORT
Chakavanzika Bay, inozivikanwa hotera yeRelais & Châteaux hotera uye # 1 yekutandarira muCaribbean yeTravel + Leisure, yakagara ichizivikanwa nemusanganiswa wayo weunyanzvi hwekugadzirwa kwepamusoro, hunyanzvi hwenzvimbo uye zviitiko zvechokwadi zvevaenzi zvinoenderana nezvinodiwa nemunhu. Iyi nhanhatu-nyeredzi yekushanyira ikozvino inounza husingaenzanisirwe mutsa uye mukurumbira wepasirese kuThe Residences paSecret Bay, yakaganhurirwa yeCaribbean chivakwa chinopa makumi mana nemaviri ezvivakwa zvinoshamisa uye dzimba mukati meiyo yakavharirwa Chakavanzika Bay. Pano iwe unowana isingawanzo mukana wekutenga eco-inoshamwaridzika imba yezororo, inozadzikiswa neasingaenzaniswi yekushandira sevhisi uye zvepasirese zvinobatsira - zvese zviri muDominica, chimwe chevashoma vane vanhu vazhinji, vanoziva zvakatipoteredza uye vane tsika zviwi zviwi muCaribbean.
Pano iwe unowana isingawanzo mukana wekutenga eco-inoshamwaridzika imba yezororo, inozadzikiswa isingaenzanisirwe-nyeredzi nhanhatu sevhisi uye zvepasirose zvinobatsira - ese ari pane chimwe chevashoma vanogara vanhu, zvakatipoteredza vanoziva uye zvakapfuma mutsika zviwi muCaribbean.
Yakasarudzika imba yakasarudzika pane yakasarudzika nzvimbo ine mapindu, pombi yedziva, tropical matanda uye emazuva ano magumo.
Kugamuchirwa kuwana kune epasirose-kirasi zvigadzirwa uye nhanhatu-nyeredzi sevhisi.
Hunhu husina hanya nechengetedzo yezvivakwa uye chirongwa chinoshanda kwazvo chekurendesa.
ZVINHU ZVAKANAKA NEZVEMUPENYU NEDOMINICA VAGARI VENYIKA
3 mahwindo emahombekombe kwaunogona kushambira
Zing Zing Yakavhurika Mhepo Yekutengesa
Gommier Spa Treehouse Chimiro
Zamann mvura yemitambo dumba negungwa
Infinity dziva rine mvura yegungwa, gungwa bhawa, nzvimbo yekudyira uye makabana *
Vetiver Sunset Dhesiki Cliff Edge
Yemazuva ano kugwinya nzvimbo uye yevana kirabhu *
Yakagadziriswa Art Gallery & Mini Brewery *
Bako regungwa pane saiti, zvisikwa nzira uye
Zvishamiso zvakasikwa zve "Natural Island"
* Kuti ipiwe muna 2021.
Akazvitsaurira muridzi wemusha
Mafambiro ekushanya kunze kweiyo chivakwa
Manejimendi uye kugadzirisa kwepfuma yako
Yekumhanyisa yeWi-Fi internet kuwana
Yekushambadzira michina inosanganisira kayaks, stand-up surfboards, yoga mats uye snorkelling michina.
Kuchenesa zuva nezuva
Stock imba yacho usati wasvika
Dominica RUS chizvarwa
Hugari hweDominica ENG
Chechipiri Citizenship Zvirongwa
2021 Dominica Ugari
2021 Ugari hweSaint Kitts neNevis
Ugari hweChipiri hwako mumazuva makumi matanhatu
Mikana yekushandura Zita uye Surname yeRudzi Rwokugara
Kambani yedu ine marezinesi ehurumende uye iri pamawebhusaiti ehurumende
Mari yedu inobvumirwa inodarika mamirioni makumi mana ema ruble - izvi zvinoitirwa rugare rwepfungwa
Hapana kana kuramba kumwe kwenguva yese yekambani yedu. Isu tinoziva mashandiro emakesi akaomesesa
Kubwinya kwechisikigo uye jena jecha remahombekombe mitsetse yeSaint Kitts neNevis zvirokwazvo inofadza uye inzvimbo yakanaka muCaribbean.
Mamiriro ekunze anopisa ezvitsuwa zvechic, mvura yakajeka inokwezva vashanyi uye inosimudzira kuvandudza bhizinesi rekushanya. Saint Kitts neNevis zvakabatana nendege dzakananga kubva kuEurope neUnited States of America, nekudaro kuve pazvitsuwa izvi kunopa akasiyana mabhenefiti kune vanonyorera kuva vagari venyika.
kuwana ugari mukati menguva isingadariki mwedzi miviri;
kodzero yekuwana ugari hwevana vari pasi pemakore makumi matatu, vabereki vanopfuura makore makumi matanhatu nemashanu;
hapana zvinodikanwa zvekugara munyika;
kusavapo kwezvinodiwa zvekuvapo kwako pachako kana uchinyorera nechikumbiro;
hapana chisungo chekunyorera vhiza yekupinda munharaunda yenyika dze155, kusanganisira iyo Schengen nzvimbo, Great Britain, Hong Kong, Singapore;
kuregererwa pamutero nenzira yemari yepasi rose;
kunyoreswa kwemagwaro epamutemo (pasipoti) yeSaint Kitts neNevis mukati menguva isingadariki mwedzi miviri.
Nzira dzekuwana ugari hweSaint Kitts neNevis:
1. Zviitiko zvekudyara kuburikidza nemupiro kuFund yekubatsira kuneVanhu Vanotambudzwa neDutu - iyo isingadzoreke chimiro chemupiro:
$ 150 zviuru - kune iye akananga kunyorera;
$ 150 zviuru - zvemhuri yevanhu vatatu (murume kana murume kana mukadzi pamwe nevana vaviri pasi pemakore gumi nemasere);
$ 25 zviuru - kune anotevera munhu ari kuchengetwa.
2. Kuisa mari muhomwe yeshuga (SIDF) - chimiro chisingadzoreke chemupiro.
$ 250 zviuru - kune iye akananga kunyorera;
$ 300 zviuru - kune mukuru anonyorera pamwe nevatatu vanovimba;
$ 25 zviuru - kune vanotevera vachengeti.
Mutengo wekutenga zvivakwa unofanirwa kuve unosvika madhora mazana mana zviuru. Real estate inofanirwa kuve ive kweanenge makore mashanu, vanhu vanoisa mari muzvivakwa vanobhadharawo mutero.
7 zviuru mazana mashanu $ - kune iye mukuru anonyorera;
$ 4 - kune vanovimba vangangoita makore gumi nematanhatu.
Kubhadhara muchimiro chemutero wenyika (wekuwana real estate):
$ 35 - kune mukuru anonyorera, vanovimba vangangoita makore gumi nemasere;
$ 20 - yemurume kana mukadzi kana murume;
$ 10 - kune mumwezve munhu anovimba naye.
Citizenship Saint Kitts uye Nevis ENG
Ugari hweSaint Kitts neNevis RUS
Hugari hwako hweReal Estate
Mari inowanikwa 3% + Kugona kwekumbozorora zororo
Antigua neBarbuda Ugari hweBouganvillea Condominium Mugove
Antigua neBarbuda Ugari hweMwedzi Gedhi Antigua Mugove
Ugari hweMontenegro (Montenegro) yekutora chikamu kana chivakwa chose. 2000 chete Pasipoti.
Ugari hweMontenegro kune mugove weWestin Ski Resort Kolašin
Ugari hweMontenegro kune chikamu cheMontenegro Breza Hotel Uye Spa
Inonyanya kufadza iwe:
Pane zvakawanda zvingasarudzwa zvekuwana mvumo yekugara muEurope. Zvimwe zvakaoma, zvimwe zviri nyore. Izvo zvese zvinoenderana nemitemo yekutama kweiyo con ...
Chivabvu 9, 2021
Maitiro ekuona nzvimbo yakanakisa yekugara papasi - kubva pane zvakaitika kwandiri, nerubatsiro rwemhinduro kubva kune vamwe cosmopolitans nemasangano akasarudzika ...
Vangani vagari venyika vanobvumirwa muRussia zvinotariswa nechinyorwa chema 62nd cheBumbiro reRussian Federation. Iwo wekutanga Mutemo haurambidze kugara kwevanhu vakawanda. Mune mutemo ...
Kubhadhara kwe $ 25000 - Citizenship neInvestment Chirongwa
Yekudyidzana $ 12500 - Citizenship neInvestment Chirongwa
Yekudyidzana $ 10000 - Citizenship neInvestment Chirongwa
Real estate yekuwana Citizenship:
Saint Lucia Zvivakwa
Saint Kitts uye Nevis Real Estate
Antigua neBarbuda Real Estate
Kune Vagari veRussia, Belarus, Ukraine, Kazakhstan: VNZ.SU
↑ Vanuatu Citizenship ↑ Grenada Citizenship ↑ Dominica Ugari ↑ Ugari hweSanta Lucia ↑ Ugari hweSaint Kitts neNevis ↑ Antigua neBarbuda Citizenship ↑ Ugari hweBulgaria ↑ Ugari hweTurkey ↑ Antique Castle iri Kutengeswa